Ny vaovao rehetra amin'ny Android 5.1 Lollipop | Androidsis
Izay mety ho toa fanavaozana kely izay mety hitondra fanamboarana bibikely marobe sy ilaina mba hiasan'ny rafitra Android tsara kokoa ary hialana amin'ny tsy fisian'ny fahombiazana amin'ny fitaovana sasany, farany miseho amin'ny zava-baovao tena mahaliana mifandraika amin'ny fiarovana sy fanatsarana ny kalitaon'ny feo rehefa miresaka an-telefaona isika.
Avy amin'ilay bilaogy iray ihany, Google nanambara omaly ny fisehoan'ny Android 5.1, fanavaozana izay manatsara ny fitoniana sy ny fahombiazana ary manolotra fiasa toa an'i fanohanana karatra SIM marobe, Fiarovana amin'ny fitaovana ary feo HD ho an'ny telefaona mifanentana. Tena mahavariana ny zava-misy fa eo ambanin'ny Device Protection fitaovana misy Android 5.1, raha toa ka eo am-pelatanan'ny olon-kafa ny antony, dia hamela izany na dia voafafa aza ny fahatsiarovana anaty ny telefaona, rehefa manandrana mametraka ROM vaovao ary miditra ny Play Store, angatahina ny kaonty voalohany, manidy ny telefaona.
1 Vitsy ny vaovao fa mahaliana
2 Fahamarinana sy fanatsarana ny fahombiazan'ny rafitra
Vitsy ny vaovao fa mahaliana
Vao haingana izahay no nihaona tamin'ny fomba Nihemotra i Google for tsy manery ny mpanamboatra hanafina ny telefaona Android 5.0 noho ny olana nomen'ity encryption data ity amin'ny fahombiazan'ny sasany amin'ny Nexus, izay tsy misy azy io intsony amin'ny finday vaovao toy ny fitaovana Nexus sasany.
Raha somary diso toerana isika tamin'ny inona ny fiarovana amin'ny Android, miaraka amin'ny fisehoan'ny Device Protection amin'ny Android 5.1, hanana fiarovana sy fiarovana manan-danja isika rehefa very na angalarina ilay fitaovanasatria hijanona ho voahidy mandra-pidirana ny kaonty Google na dia misy olona mamerina ny fitaovana amin'ny toeran'ny orinasa aza. Ity fampiasa ity dia ho hita amin'ny telefaona Android 5.1 sy ny takelaka rehetra.
Antso am-peo ao amin'ny HD izay tafiditra ao amin'ny 5.1 manatsara be ny kalitaon'ny feo ho an'ny fitaovana mifanentana toa ny Nexus 6. ny tenany.ary ny fanohanana ny SIM marobe dia zava-baovao iray hafa izay hamela ny fitantanana tsara kokoa ny vidin'ny telefaona amin'ny taha hafa.
Hamaranana ny vaovao kely, ny fidirana haingana amin'ny fifehezana tambajotra Wi-Fi ary ireo fitaovana mifangaro miaraka amin'ny Bluetooth amin'ny alàlan'ny fikirana haingana ao amin'ny bara fampandrenesana.
Fahamarinana sy fanatsarana ny fahombiazan'ny rafitra
Tsy azonay adino fa io no mety ho tsara indrindra tamin'ity fanavaozana ity ho an'ireo izay manana Nexus ary nahita ny fihenan'ny fampisehoana noho ny azo antoka bibikely toy ny 'fahatelon'ny fahatsiarovana' ankoatran'ny ahenao ny hafainganam-pandehanao mizaha ny fitaovanao izany koa dia nitarika fihinanana bateria avo kokoa. Ity bibikely ity dia namboarina ary koa ny maro hafa izay hamela fanandramana Android tsara kokoa amin'ny Nexus sy ny terminal Android hafa izay havaozina amin'ny Android 5.1 Lollipop.
Raha manana Wifi Nexus 7 2012, Nexus 10 na Nexus 5 ianao azonao atao ny mametraka ny sary misy azy taloha kelin'izay amin'ny alàlan'ity fidirana ity nalefa latsaky ny 30 minitra lasa izay.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Tutorials » Android Version » Ny vaovao izay entin'ny Android 5.1 Lollipop